Ukucofa okusinda okubizwa ngokuba ziintsuku ezili-100 zokukhusela isiseko sakho | I-Androidsis
Khusela isiseko sakho se-zombie ekusindisweni kokucofa kwiintsuku ezili-100
Iintsuku ezili-100 ngumdlalo we-zombie oqhelekileyo apho kufuneka siphucule isiseko sethu ukuze ikwazi ukuzikhusela. Umdlalo we-arcade apho kufuneka siphucule nganye yezinto eziza kusivumela ukuba siphume kwezi zombies sinomdla wenyama eninzi yomntu.
Uhlobo lwe-arcade lokucofa apho kukho Isitayela seRetro kunye nokudlala ngokulula, iyakwazi ukusikhonkxa ukuvula olo phuculo okanye ukubeka loo nqaba esivumela ukuba sitye i-bun ngelixa sibona indlela abahlobo bethu abalahla ngayo abo bahamba kakubi.
1 Konke ukusinda
2 Khawulezisa umdlalo ngeentsuku ezili-100
3 Ungaphuthelwa kokongezwa
Iintsuku ezili-100 ngumdlalo owaziyo ngokuqinisekileyo kuba ibikho kwiVenkile yeGoogle Play ixesha elithile. Umdlalo ofanele ukuphawula ngawo kwezi ndawo, kuba siyaluthanda olu hlobo lwemidlalo yokusinda zombie; nangona yonke into yenzeka kwiscreen esinye. Sinezithuba ezithile esinokwazi ngazo ezahlukeneyo zombie izihloko zomdlalo we-androidt enye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kunye neekati.
Kwiintsuku ezili-100 kuya kufuneka sikhusele isiseko sethu kuzo zonke ezo zombies. Ekuqaleni siyakuba nesithintelo kunye noncedo oluxabisekileyo lomnwe wethu ukwenza oko ngokungapheliyo ukubetha isikrini ukutshabalalisa wonke umhambi. Njengoko sifumana iingqekembe kwaye sizichitha ukuphucula amandla kunye nenqanaba leqhawe lethu, sinokuvula uphuculo olutsha kunye nokufumana abahlobo abatsha.
Abo bahlobo baya kujoyina kuhlaselo oluzenzekelayo ukuze sikwazi ukuphumla ukubetha kwentliziyo kancinci kwaye bakhathalela iZombi eziqhelekileyo. SineeZombi ezinkulu nezinamandla. Oku kuyakufuneka sisebenze ngeqhosha eliza kuvela amaxesha ngamaxesha. Ewe ulungiselele kakuhle kuba uya kuba nenani elikhulu lamanqaku obomi.
Khawulezisa umdlalo ngeentsuku ezili-100
Kwiintsuku ezili-100 nathi sinokubakho khawulezisa umdlalo Ukuze sikwazi ukuphelisa inani elikhulu leZombi, kwaye ngenxa yoko sifumane imali eninzi kwaye sikhawulezise zonke iinkqubo zokuphucula kunye nokongeza abahlobo abatsha. Inyani yile yokuba kukho umxholo owaneleyo apha wokufumana umtya kwaye masibheje ekufumaneni olo hlaziyo kwisiseko sethu.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ulixabise njani ijika lobunzima Iintsuku ezili-100 zifezekiswe ngokugqibeleleyo ukuze siqhubeke nokudlala. Ingakumbi xa sifika ngexesha xa yonke into isenzeka ngesiqhelo. Iingqekembe ezininzi zithetha ukuphucula isiseko sethu kunye nokudubula okunokwenzeka ukuze kupheliswe ezo zombies ziya kuba neendawo ezingaphezulu zokubetha.
Ukucofa okusinda kuyo imidlalo inokuba yinto engenasiphelo de sifike apho kula manqanaba aphezulu ekuhlaziyweni. Ngokusengqiqweni siyakufuna ukomeleza isiseko sethu, ke umonde omncinci, amaqhosha amaninzi kwiscreen kunye nokubulala abo baphathi bokugqibela abaya kuthi basinike iingqekembe zemali ezininzi ukutshabalalisa.
Kwiintsuku ezili-100 kufuneka sizikhathalele amabhaso afika ngokungacwangciswanga, kuba bemele iingeniso ezilungileyo kwibhokisi yethu yemali kwaye ke sinako ukuqhubeka nokuphucula amanqaku omonakalo wabo bonke abahlobo bethu abatsha. Sinokuvula ezinye izincedisi okanye siye kwii-micropayments ngoku ukukhawulezisa zonke iinkqubo zohlaziyo kunye nophuculo olutsha.
Ngokobuchwephesha yiyo Umdlalo olula kakhulu, nangona yonke into eyenziweyo icingelwe kakuhle. Uhlobo lweRetro oluneziphumo ezithile ezisisiseko, kodwa oko kunika iziphumo eziyimfuneko ukuze siqhubeke nokudlala. Kwaye yile nto uyibonayo kwisikrini esiza kuyifumana xa siqala ukuyidlala. Kuncinci ukuthetha ngeentsuku ezili-100.
Ngoku kuhlala kunjalo udlala le nqakrazo yokusinda enomdla ebizwa ngokuba yiintsuku ezili-100 Kwaye uzama ukomeleza isiseko sakho ukuze uthintele ukugqitha kwelo qela leZombies zijolise ngqo kuwe. Omnye umdlalo we-zombie kule Krisimesi kwaye akukho kunqongophala kokonwaba kwiscreen se-mobiles zakho.
Ijika lakho lobunzima
Uhlobo lwe-retro hobbyist
Uya kudlala kwinqanaba elifanayo rhoqo
IINTSUKU eziyi-100 - Ukusinda kweZombie
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Khusela isiseko sakho se-zombie ekusindisweni kokucofa kwiintsuku ezili-100
Khwela udonga ukhwele iRocky Climb engaqhelekanga
Iindlela zokusebenzisa ngcono ifowuni yakho ye-Android